Doorka Goleyaasha Deegaanka ee Abuurista Adeeg Bulsho oo Hufan - SomalilandPost
Home Maqaallo Doorka Goleyaasha Deegaanka ee Abuurista Adeeg Bulsho oo Hufan
Qalinkii: Axmed Nuur Muuse
Heshiiskaas dhex maraya muwaadinka iyo GD waa in loo arkaa in uu yahay ballanqaad Eebbe iyo uunku ba marag ka yihiin. Sidoo kale, muwaadiniinta laftooda, waxgaradka iyo urrurada maxaliga ahi ba waxa ay ku baraarugsanaanayaan ilaalintii axdigaas; hadh iyo habeen na waa ay isku taxalujinayaan in ay dusha kala socdaan meel marintiisa. Taas waxa laga dhaxli karaa kobac ku yimaadda fahanka, garaadka iyo kalsoonida shicibka ee ku waajahan arrimaha dawladaha hoose; ugu dambeyna waxa ay xoojin doontaa isla-xisaabtan dhab ah. Dawladda Dhexe, Xeer-ilaalinta iyo Goleyaasha Xeer-dejinta Qaran iyaguna xil culus iyo cadaadis ayaa fuulaya, oo waxa ay ku khasbanaanayaan in ay si joogto ah u kormeeraan dhawrista ballanqaadkaas.
Wakhtigan, waxa jirta fursad wayn oo mudan in xil culus la iska saaro xulista, kalareebista iyo igmashada xildhibaannada GD ee doorashada soo socota. Haddii la rabo in laga fogaado dhibaatooyin dhaqaale, siyaasaded, shaqaale, musuqmaasuqa iyo qabyaaladeed ee ragaadiyay goleyaashii hore, waa in maanta laga hawl galaa. Casharradii laga bartay labadii gole ee hore waa in loo adeegsado in gefafkii lagu saxo, lana hagaajiyo habka loo marayo doorashada, maamulka iyo hoggaanka GD.
Si shicibka JSL u helo adeeg hufan, uguna baxo bayhoofka iyo duruufaha adag ee haatan lagu jiro, waa in garaadku shaqeeyaa, loo na fiirsadaa cidda talada loo dhiibayo.
Xubnaha goleyaasha deegaanka waa in loo arkaa in ay yihiin shaqaale hishiis sharci ah ku jooga, leh na masuulliyad cad oo la xisaabin karo. Hadafku maaha in uu noqdo in qof uun meesha la geeyo, se waa in hammiga fogi ahaadaa in bulshada loo adeeggo, oo baahi la daboolo. Taas marka la helo, ayaa horumar la gaadhayaa, doorka dhabta ah ee GD ka na la fahmayaa, ilbaxnimada dawladnimad na si sax loo la jaan qaadayaa.
Ahmed Nur waa Cilmi-baadhe, daneeya arimaha bulshada, caafimaadka, xaquuqda caruurta iyo dhaqanka Soomaalida. Waa samafale ka soo shaqeeyay haayaddaha samafalka ee caalamiga ah iyo kuwa gudaha ba, kuna takhasusay cilmiga barashada bulshada (Sociology).
Waxa uu ka mid yahay aasaaseyaasha Kuuliyadda Adeegga Bulshada (School of Social Work) ee Jaamacadda Hargeysa, waxaanu ka noqday Hormood kuuliyadaas sannadihii (2016-2018).